Aingam-panahy Avy Any Okraina No Nanosika Ireo Venezoeliana Mpanao Hetsipanoherana Hanaingo ny Ampingany Amin’ny Marika Azy Ireo Manokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2017 16:09 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Français, русский, Español
Na ao amin'ilay tanàna amerikàna Miami aza, nisy olona nametraka iray amin'ireny ampinga ireny eo amin'ny sarivongan'i Simón Bolívar, ilay maherifon'ny firenena Venezoeliàna, ho toy ny fanambaràna fanoherana amin'ny endrika artistika.
Ny hetsika Euromaidana 2014 tany Okraina no aingam-panahy nanosika ilay fandokoana ampinga, araka ny voalaza ao anatin'ny fanadihadiana “Winter of Fire” (Ririnin'Afo) nosoratan'ilay Rosiana talen'ny famokarana, Evgeny Afineevsky. Araka ny nambaran'ilay Arzantina mpanao gazety, Viridiana Ramírez, tsy ela akory izay io fanadihadiana io no nojerena tany aminà toerana maro natao ho an'ny daholobe tany Caracas.
Notaterin'ny Vivo Play, fantsom-baovao ety anaty aterineto, ny momba ireny ampinga ireny, ary nitafa tamin'ny profesora mpampianatra haimarika, Humberto Valdivieso, mba hamantatra ireo hafatra fonosin'izy ireny. Karazana ampinga roa no nofaritan'i Valdivieso: ny ampinga “aron-tava” izay maneho ny idealy ijoroan'ireo mpanao hetsipanoherana, ary ny ampinga ‘fitaratra’ izay maneho ny sarin'ireo mpifanandrina amin'ireo mpanao hetsipanoherana. Mitondra marika famantarana finoana ihany koa ireo ampinga, izay midika hoe miaro ireo izay mitondra azy ireny ireo ampinga, sy hoe fotsiny noho ny akora nentina nanamboarana azy, fa koa noho ny fiarovan'ny nahary. Misy ireo marika mampiavaka manokana ny kolontsaina Venezoeliàna, ary hatramin'ny marika famantarana mihoatra noho izay takatry ny saina sy hita maso:
… Nampiasaina tamin'ireo fihetsiketsehana nitranga tao Venezoelà hatramin'ny 1 Aprily ireo ampinga faritan’ [i Valdivieso] ho toy ny “ampinga aron-tava” sy “ampinga fitaratra”. Samy asehon'ireo ampinga ireo ny tsirairay milanja azy sy ny vondrona arovany. Ampinga misy hafatra momba ny fiteny toy ny hoe “demaokrasia”, “fanoherana” ary “fahalalahana”, “ny rariny” sy “fandriampahalemana”. Misy ihany koa araka izany ireo ampinga maneho sarin'ny Lalàm-panorenana, ny Tanambokovokon'ireo “Templiers”,sary masina, ny saina nentindrazan'i Venezoelà [misy kintana fito fa tsy valo, toy ny nampanaovin'ny filoha teo aloha, Hugo Chávez] ary mainty ho toy ny mariky ny fisaonana.
Nozaraina betsaka tao amin'ny media sosialy ihany koa ny sarin'ireny ampinga ireny. Tao amin'ny Instagram, ireo mpanao gazety mpikirakira tarehimarika sady mpaka sary matianina, toa an'i Issac Paniza, Rafael Hernández Marcano ary Jairo Gudino dia nizara sary maro miantraika lalina, izay ahafahana mijery akaiky ireny marika famantarana amin'ny ampinga ireny.
Araka ny voalaza tery ambony, ny sasany amin'ireo ampinga dia maneho sary masina natao ho fiarovana izay hita ao anatin'ny finoana Katolika ao Venezoelà, toy ny fiantsoana an'i Masina Maria sy ny sarin'i Jesoa Kristy, araka ny hita eo afovoan'ny sary eto ambany. Eo amin'ny ankavia amin'ny sary ao anatin'ny bitsika eto ambany, ilay Mpiandry Ondry Tsara no aseho, ary eo amin'ny ankavanana dia ny Virijinin'i Coromoto, olomasina mpiaro an'i Venezoelà:
Ao ambadik'ireo ampingan'ny fanoherana: toy izao no fiarovantena ataon'ireo tanora mpanao hetsipanoherana ao Venezoelà (Lahatsary) https://t.co/Sb8gRFQwOP pic.twitter.com/Qx6UUW6mFB
Goatemalà 3 herinandro izay
Kolombia 3 herinandro izay